ကန် လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Russel မြန်မာပြည်ရောက်ရှိ
ကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Daniel Russel ။
ဒီနေ့ ညနေ နေပြည်တော်ကိုရောက်မယ့် အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ရေးရာ အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Daniel Russel ဟာ လာမယ့် ၂၀၁၅ မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေကို တာဝန်ရှိသူတွေ နဲ့ ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်သံရုံးက ပြောပါတယ်။ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Daniel Russel ရဲ့ ခရီးစဉ်အကြောင်း အပြည့်အစုံကိုတော့ VOA သတင်းထောက် မသိင်္ဂီလင်းက ပြောပြပေးပါမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို သုံးရက်ကြာ လာရောက်မယ့် အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ရေးရာ အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Daniel Russel ဟာ ဒီကနေ့ ညပိုင်းမှာ နေပြည်တော်ကို ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ခရီးစဉ်အကြောင်းကို ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်သံရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက အခုလို ပြောပါတယ်။
"စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်ကနေ ၅ ရက်ထိ မြန်မာနိုင်ငံကို လာမယ့် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Daniel Russel ဟာ နေပြည်တော်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အခြား အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံသွားမှာပါ။"
ဒါ့အပြင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ လူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လည်း တွေ့သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်သံရုံး facebook စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လက်ထောက်ဝန်ကြီး Russel ဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နဲ့ ၁၀ ရက်နေ့တွေမှာ နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ EAS အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးညီလာခံ ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိ စည်းဝေးပွဲအတွက် အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ပြီး တက်ရောက်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက် မြန်မာခရီးစဉ်မှာတော့ မကြာမီကျင်းပတော့မယ် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့အတူ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခက်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ အခြားအကြောင်းအရာတွေ ကို ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက အခုလိုပြောပါတယ်။
"သူ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေတုန်း နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေကို တာဝန်ရှိသူအသီးသီးတွေနဲ့ ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အားပေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်း အလေးအနက်ထားပြောဆိုသွားမယ့်အပြင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာ တိုးတက်မှုတွေရှိလာအောင် အားပေးသွားပါမယ်။"
အရှေ့အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ရေးရာ အမေရိကန် လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Daniel Russel ဟာ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်ကနေ ၈ ရက်နေ့အထိ တရုတ်နိုင်ငံကို ခရီးဆက်မှာဖြစ်ပြီး တရုတ်အရာရှိတွေနဲ့ နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူ ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီကနေမှတဆင့် မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံကို ခရီးဆက်မှာဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ပိုမို နီးစပ်မှုရှိအောင် ဆွေးနွေးမှုတွေအပြင် မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ပေါ်ထွန်းတာ ၂၅ နှစ် ပြည့်မြောက်မှုကိုလည်း ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သိင်္ဂီလင်း / ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း)
အေးသီတစ်ယောက် မနက်မိုးလင်းမှာ အရမ်းကြောက်နေမိတယ်။ လကုန်တော့မယ့် မနက်ဖြန်ကို အရင်က ဝမ်းပန်းတသာကြိုဆိုခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ မနက်မိုးလင်းမှာကို ကြောက်နေမိတယ်လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။
“မနက်ဆို အဆောင်ခနဲ့ ယူထားတဲ့ ဈေးဖိုးအကြွေးတွေပေးရမှာ၊ လက်ထဲ ပိုက်ဆံမရှိတော့ ရင်ပူနေရတယ်” လို့ အထည်ချုပ်အလုပ်သမလေး အေးသီက ပူပင်သောကများနေဟန်နဲ့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကျော်ကာလတုန်းက ပုံမှန် လစဉ်လစာငွေလေးနဲ့ အဆောင်ခ၊ ဈေးဖိုး စားစရိတ်အပြီး ဧရာဝတီတိုင်း၊ နယ်မြို့မှာရှိတဲ့ မိသားစုဆီ ငွေလွဲပို့နိုင်တဲ့အတွက် လကုန်ရက်တွေမှာ အပျော်ပီတိတွေ ဝေဖြာခဲ့ရ ပေမယ့် ဒီလအတွက်တော့ ရင်ပူနေရတယ်လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၄ ရက်နေ့မှာ သူမ ဘယ်လိုမှမမျှော်လင့်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကြောင့် သူမစိတ်ကူးတွေ၊ သူမအိပ်မက်တွေ လွင့်ပျောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး ဘာမှစားမဝင်ဘဲ ခေါင်းတစ်ခုလုံး မီးခိုးထွက်မတတ် စဉ်းစားခဲ့ရတယ်လို့ အေးသီက ဆိုပါတယ်။
အလုပ်သမားထုမျှော်လင့်နေတဲ့ အနည်းဆုံးလုပ်ခ ၈ နာရီ ကျပ် ၃၆၀၀ ဆိုတဲ့ သတင်းကောင်းကို မကြားရခင် သြဂုတ် ၂၄ ရက်နေ့မှာ အေးသီတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ လှိုင်သာယာ၊ စက်မှုဇုန် ၄ က Asia Rose အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ အေးသီအပါအလုပ်သမား ၁၉၆ ယောက်ကို အလုပ်သမားဥပဒေအရ တစ်လကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ အလုပ်ရှင်က အော်ဒါနည်းပါးတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ အလုပ်ကရပ်စဲ လိုက်ပါတယ်။
“အဲဒီနေ့က ကျွန်မတို့ မျက်ရည်တောင်ကျတယ်။ ဒီလကုန်ရင် ၃၆၀၀ ရတော့မယ်ဆိုပြီးဝမ်းသာနေကြတာ။ ၂၃ ရက်နေ့ ညနေအထိတော့ အလုပ်ဆင်းနေရတုန်းပဲ၊ မနက်အလုပ်လာတော့မှ စာရင်းပါတဲ့ ၁၉၆ ယောက် စက်ရုံထဲ မဝင်ရတော့တာ”လို့ မအေးသီက စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဆိုပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်လောက်က စတင်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ Asia Rose အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ အေးသီအပါအဝင် အလုပ်သမားအချို့နဲ့ စတင်ခဲ့တယ်လို့ သူမကဆိုပါတယ်။ အခုတော့ အလုပ်သမား ၄၂၀ ကျော် ရှိပြီးတော့ အချိန်ပို အမြဲလိုလိုရှိနေတယ်လို့ သူမကဆိုပါတယ်။ အလုပ်သမားအင်အား လျှော့လိုက်တဲ့အထဲမှာ လုပ်သက် ၁၀ နှစ်ကျော် အလုပ်သမားအများစု ပါသွားသလို အခြေခံအလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ အကုန်နီးပါး ပါသွားတယ်လို့ အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ အလုပ်သမားတွေက ဆိုပါတယ်။
အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို နစ်နာကြေး လာရောက်ထုတ်ယူကြဖို့ စက်ရုံကကြေညာထားပေမယ့် လျော်ကြေးမယူ အလုပ်ကိုသာ ပြန်ခန့်ဖို့ တောင်းဆိုနေတာကြောင့် အေးသီတို့ လစာနဲ့ လျော်ကြေးမယူဘဲ အလုပ်ပြန်ရမလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ စောင့်မျှော်နေကြပါတယ်။
“ကျွန်မတို့က ဒီစက်ရုံစကတည်းက လုပ်လာတာ၊ တစ်နေ့ Day ကြေး ၁၀၀ ကျော်နဲ့ လုပ်လာခဲ့တဲ့ လူတော်တော်များများ လူလျှော့တဲ့အထဲပါသွားတယ်၊ ၁၀ နှစ်ကျော်လောက်လုပ်လာပြီးမှ ဒီစက်ရုံက ထွက်ရမယ် ဆိုတော့ နောက်ဘယ်စက်ရုံကို သွားရမှန်းမသိတော့ပါဘူး” လို့ အလုပ်သမလေး တစ်ဦးကဆိုပါတယ်။
နယ်ကပြောင်းရွေ့လုပ်သားအများစုမှီခိုအားထားရာ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်တွေမှာ လုပ်ခလစာနည်းနည်း ပေးကာ အလုပ်ခေါ်ယူတာတွေ အများအပြားရှိနေပါတယ်။ သို့သော် အနည်းဆုံးလုပ်ခ သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် စက်ရုံတွေမှာ လုပ်သားအင်အားလျှော့တာတွေကြောင့် အလုပ်တစ်နေရာရဖို့ အခုချိန်မှာ မလွယ်ကူနိုင်တော့ပါဘူး။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရုတ်နိုင်ငံက အများဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသလို အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာလည်း တရုတ်နိုင်ငံက အများစုကြီးစိုးထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ အထည်ချုပ် လုပ်သားအများစုက တစ်နေ့ Day ကြေး တစ်ထောင်ကျော်သာရှိနေတဲ့အတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မှာ လုပ်ခလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုတွေရှိလာတဲ့အခါ အစိုးရက အရေးယူမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ အချိန်မှာလည်း အလုပ်သမားအချို့ကို ပုဒ်မတွေနဲ့ တရားစွဲဆိုထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ခလစာနည်းပါးတဲ့အတွက် မကြာခဏ ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေကို ဖြေရှင်းရန် အစိုးရက အနည်းဆုံးအခ ကြေးငွေ ဥပဒေကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် မတ် ၂၂ ရက်နေ့မှာ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၉ ရက်နေ့ကြမှသာ တနိုင်ငံလုံး တပြေးညီ တစ်နာရီ ကျပ် ၄၅၀၊ ၈ နာရီအတွက် ကျပ် ၃၆၀၀ သတ်မှတ်ကြောင်း အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီက အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုအတည်မပြုခင် အနည်းဆုံးလုပ်ခ ကျပ် ၂၅၀၀ ကိုသာ ပေးနိုင်မယ်လို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဆိုထားပြီး ဇူလိုင် ၂ ရက်နေ့မှာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်အသင်းက လုပ်ငန်းရှင် ၁၀၀ ကျော်က ကျပ် ၃၆၀၀ ကို မပေးနိုင်ဘူးလို့ လက်ထောင်ကာ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသလို ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့မှာလည်း လုပ်ငန်းရှင်တွေက ၃၆၀၀ ကို မပေးနိုင်ကြောင်း ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။
အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ မသတ်မှတ်မီ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က လုပ်ငန်းရှင် ၁၇၅ ဦး ကန့်ကွက်လွှာကို သက်ဆိုင်ရာသို့ ပေးပို့ထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်အသင်း ကဆိုထားပါတယ်။
အငြင်းပွားမှုတွေနဲ့ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေကြောင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာ အလုပ်သမားလျှော့ချမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ အလုပ်သမားအရေးကျွမ်းကျင်သူတွေ သုံးသပ်ခဲ့ကြသလို အနည်းဆုံး အခကြေးငွေ မသတ်မှတ်မီ ရက်ပိုင်းအလိုမှာ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်က အလုပ်သမား ၂၀၀ နီးပါးနဲ့ ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန်က အလုပ်သမား ၂၀ နီးပါး လျှော့ချမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။
“အစိုးရအနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်အကောင်အထည်ဖေါ်လျှက်ရှိရာမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ ဆင်းရဲမှုလျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် အလုပ်လုပ်နိုင်သူတိုင်း အလုပ်ရရှိဖို့နဲ့ သူတို့အတွက် သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်ရရှိရေးကိစ္စရပ်များကို အဓိကထားပြီး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတယ် ဆိုတာကို တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်က ဇူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့ အလုပ်အကိုင်ပြပွဲမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အနည်းဆုံးလုပ်ခလစာ မသတ်မှတ်ခင် အလုပ်အမှာစာ နည်းပါးတဲ့အတွက် ၁၀ နှစ်အထက် အလုပ်သမားတွေအပါအဝင် အခြားအလုပ်သမား ၁၉၆ ယောက်ကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ အလုပ်ထုတ်နစ်နာကြေးပေးကာ လုပ်ငန်းခွင်က ရပ်စဲခံခဲ့ရတာကြောင့် အလုပ်ပြန်ခန့်ထားပေးဖို့ ဆက်လက် တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။
“ ၃၆၀၀ ရရင် အိမ်အတွက်အဆင်ပြေပြီလို့ ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မတို့ အလုပ်ထုတ်ခံရတယ်၊ လျော်ကြေးပေးမယ်လို့ပြောတယ်၊ ကျွန်မတို့အတွက် လျှော်ကြေးမလိုဘူး၊ အလုပ်ပဲ လိုတယ်” လို့ Asia Rose အထည်ချုပ်စက်ရုံ အခြေခံအလုပ်သမားသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ မသန္တာမိုးက ပြောပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေ အလုပ်ပြန်ရဖို့အတွက် တောင်းဆိုသွားမယ်လို့ သူမက ဆိုပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေကို လုပ်ငန်းခွင်မှ မထုတ်ပယ်မီ ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြိုတင်အကြောင်းကြားရမယ်လို့ အလုပ်သမားဥပဒေမှာ အတိအလင်းဖေါ်ပြထားပေမယ့် Asia Rose အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ ကြိုတင်အကြောင်းကြား ခြင်းမရှိဘဲ အလုပ်သမားတွေကို လုပ်ငန်းခွင်မှထုတ်ပယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်ရှင်က အလုပ်သမားတစ်ယောက်ကို အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ရာမှာ အလုပ်သမားဥပဒေများနဲ့ ညီညွတ်မှုမရှိ ဟုယုံကြည်ရင် ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ အလုပ်သမားကို ပြန်ခန့်ထားဖို့ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းက သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှင်ထံ တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်လို့ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ မှာ ဖေါ်ပြထားပေမယ့် Asia Rose အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ အခြေခံအလုပ်သမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေ အကုန်လုံးထုတ်ပယ်ခံထားရပါတယ်။
“၁၉၅၁ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံအက်ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ၊ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ အမိန့် ကြေညာစာနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ၊ သက်ဆိုင်ရာရုံးတွေကိ်ုလည်း ပြောထားပါတယ်၊ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ပါအတိုင်း လျော်ကြေးငွေဥပဒေနဲ့အညီ ပေးထားပါတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ဥပဒေအကုန်လုံးနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ သက်ဆိုင်ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ ဝါဏိဇပဋိပက္ခဖြေရှင်းရေးအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” လို့ Asia Rose အထည်ချုပ်စက်ရုံမှူးက ဆိုပါတယ်။
ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ လုပ်သားအင်အားလျော့တာကို ဥပဒေနဲ့အညီလို့ဆိုတဲ့ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့စကားအပေါ် ထုတ်ပယ်ခံရတဲ့ အလုပ်သမားတွေကမကျေနပ်ကြတဲ့အတွက် ဆန္ဒထုတ် ဖေါ်ဖို့အထိ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
“ရက်ပေါင်း ၃၀ ကြိုတင်အကြောင်းကြားမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့အလုပ်ထုတ်နစ်နာကြေး ၂ လဆိုရင် ၂ လစာပဲရမယ်၊ ရက်ပေါင်း၃၀ ကြိုတင်အကြောင်းမကြားရင် အပို တစ်လကြေး ထပ်ဆောင်းရမယ်၊ အခု လုပ်သားအင် အားလျှော့ချလိုက်တာ ဥပဒေနဲ့ညီပါတယ်။ အရှုံးပေါ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ ပိတ်မှာပဲ၊ လျှော့ချတာကို တားလို့မရဘူး၊ အစိုးရဌာန ဘက်ကနေပြီးတော့ ဘယ်စက်ရုံမှာ လုပ်သားအင်အားဘယ်လောက်လျော့မလဲ ဘယ်စက်ရုံမှာ လုပ်သားအင်အား ဘယ်လောက်လိုမလဲ ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လောက်က Data ကောက်ထားတယ်၊ လုပ်သားအင်အား လျော့ချခဲ့သည်ရှိသော် ဘယ်စက်ရုံက ဘယ်နှစ်ယောက်လိုသလဲဆိုတာ လမ်းညွန်ပေးလို့ရတယ်” လို့ အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီဋ္ဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမောင်မောင်နိုင် က ပြောပါတယ်။
အနည်းဆုံးအခကေးငွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနဲ့အခြားလုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်သားအင်အားလျှော့ချမှုတွေရှိလာနိုင်ပြီး လုပ်သား နှစ်သိန်းကျော်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အလုပ်သမား အရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေက ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေမသတ်မီ ကြိုတင်လုပ်သားအင်အားလျှော့ချတာတွေ၊ မကြာမီ လာမယ့် ကာလအတွင်းလုပ်သားအင်အားလျှော့ချမှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်အလုပ်လက်မဲ့လုပ်သားအင်များ ပြားလာပြီး အလုပ်လက်မဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ အလုပ်သမားရေးကျွမ်းကျင်သူတွေက ထောက်ပြကြပါ တယ်။
အလုပ်လက်မ့တွေများပြားလာမယ့် အချိန်မှာ အေးသီတို့လို့ အလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့ အလုပ်သမားတွေအတွက် အလုပ်တစ်နေရာရရှိဖို့မလွယ်ကူနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတစ်ခု အေးသီခေါင်းထဲရုတ်တရက်ဝင်လာစဉ်ခဏ “ကျွန်မတို့မိသားစုတွေအတွက် တည်မြဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့ လိုအပ်နေတာအမှန်ပါ” လို့ ရင်ဘတ်ထဲက လေပူ တွေအကြိမ်ကြိမ်မှုတ်ထုတ်ရင်း ဆိုလိုက်ပါတယ်။
Reporter News Journal
Alaska အနီး နိုင်ငံတကာ ရေပြင်ထဲ တရုတ် သင်္ဘောတွေ တွေ့ရှိ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား Alaska ရောက်ရှိ။ (စက်တင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၅)
တရုတ်ရေတပ် သင်္ဘော ၅ စင်းကို Alaska ကမ်းလွန် နိုင်ငံတကာ ရေပြင် မှာ တွေ့နေရတယ်လို့ အမေရိကန် အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။ ဒါဟာ တရုတ်ကမ်းခြေနဲ့ ဝေးလံတဲ့နေရာတွေမှာပါ စစ်အင်အားပြမယ့် စီမံကိန်းကို အကောင်ထည်ဖေါ်ဖို့ တရုတ်အစိုးရရဲ့ ကြိုးစားမှု အသစ်တရပ်လို့ လေ့လာသုံးသပ်သူ အများအပြားက မြင်ကြပါတယ်။
အမေရိကန် ပင်တာဂွန်စစ်ဌာန ပြောခွင့်ရ Bill Urban ကတော့ ဒီသင်္ဘော ၅ စင်း ရှိနေတယ် ဆိုတာကို မနေ့က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး ဒါဟာ Bering ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ တရုတ် ရေတပ်သဘောင်္တွေကို အမေရိကန်က ပထမဆုံး အကြိမ် တွေ့တာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာရေပြင်ထဲ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနဲ့ အညီ စစ်သင်္ဘောတွေ သွားလာခွင့်ရှိတဲ့ နိုင်ငံအားလုံးရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို လေးစား ပါကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သလို ဒီသဘောင်္တွေကို အမေရိကန် စစ်တပ်က နောက်ယောင်ခံ လိုက်နေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အမေရိကန် အရာရှိတွေအနေနဲ့ဒီသင်္ဘောတွေကနေ ခြိမ်းခြောက်မှုရှိတဲ့ လှုပ်ရှားမှု တစုံတရာ လုပ်တာမတွေ့ရဘူးလို့ သမ္မတ အိမ်ဖြူ ပြောခွင့်ရ Josh Earnest က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီသင်္ဘောတွေ ဘာရည်ရွယ်ချက် နဲ့ ရောက်နေတယ် ဆိုတာကိုတော့ သေသေချာချာ မသိရသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ထိမ်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် သဘာဝ ဝန်းကျင်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ သူ့ရဲ့ မူဝါဒတွေကို ပံ့ပိုးနိုင်ဖို့ အမေရိကန် သမ္မတ Barack Obama က Alaska ပြည်နယ်ကို ရောက်နေတုန်းမှာပဲ အခုလို့ တရုတ်သင်္ဘောတွေ ကို တွေ့နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သမ္မတအိုဘားမားရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ တိုက်ပြီး တရုတ်အစိုးရက သူ့ ရေတပ် သဘောင်္တွေကို ချထားတာတော့ဖြစ်နိုင်ခြေ သိပ်မရှိဘူးလို့ CSIAမဟာဗျူဟာ နဲ့ နိုင်ငံတကာ လေ့လာရေး ဗဟိုဌာနကRalp Cossa ကပြောပါတယ်။
မလေးရှား ကမ်းလွန်မှာ စက်လှေတစီး နစ်မြုပ်
​ခု​ချိန်​အ​ထိ ၁၄ ​ဦး ​သေ​ဆုံး​တယ်​လို့ ​အ​တည်​ပြု​နိုင်​ကြောင်း ​မ​လေး​ရှား ​ပြော။ မလေးရှား နိုင်ငံ အနောက်ဘက် ကမ်းလွန် ပင်လယ်ထဲမှာ လူ ၇၀ ကျော် တင်ဆောင်လာတဲ့ စက်လှေ တစ်စီး ဒီကနေ့ ကြာသပတေးနေ့ အစောပိုင်းက တိမ်းမှောက် နစ်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့ မလေးရှား အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
အဲဒီ စက်လှေ နစ်မြုပ်ရာမှာ အမျိုးသမီး ၁၃ ယောက်နဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက် စုစုပေါင်း ၁၄ ယောက် သေဆုံးတယ်လို့ အတည်ပြုနိုင်ကြောင်း မလေးရှား ရေကြောင်း အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။ လူ ၁၅ ယောက်ကိုတော့ ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
စက်လှေပေါ် လိုက်ပါ လာသူတွေဟာ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ရကြောင်း အာဏာပိုင်တွေက ဆိုပါတယ်။
အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူတွေကို ရှာဖွေဖို့ လေယာဉ် တစ်စီးနဲ့ သင်္ဘောတွေ စေလွှတ် ထားတယ်လို့ မလေးရှား အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။
မလေးရှား နိုင်ငံထဲက စိုက်ခင်းတွေနဲ့ စက်ရုံတွေမှာ ထောင်နဲ့ချီတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသားတွေ တရားမဝင် အလုပ် လုပ်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေ နေရပ် ပြန်ရာမှာ အန္တရာယ်များတဲ့ ရေလမ်းခရီးကို သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။
““မောင်နှမသုံးယောက်ကို ဘယ်လောက်ပေးမှာလဲ၊ အသက် သုံးနှစ်အရွယ်၊ ခြောက်နှစ်အရွယ်၊ ရှစ်နှစ်အရွယ်နဲ့အကြီးမလေးကထမင်း ချက်တတ်နေပြီ၊ အငယ်နှစ်ယောက်ကိုလည်း တစ်ခါတည်း ပေးလိုက်မယ်လို့သူတို့ ( မွေးစားမယ်ဆိုပြီးခေါ်ထားသူ)က ဆက်သွယ်လာတယ်”” လို့ အမှတ် ၁၁၊ ပထမထပ် (အေ)၊ ရွှေဘိုလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေမြို့နယ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ အလင်းသစ်ဦးတည်ရာ မိဘမဲ့ကလေးများ ကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်သူ ကိုဇော်ထွန်းက စွန့်ပစ်ကလေးငယ်တွေကို လိုက်လံကောက်ယူခဲ့တဲ့ အဖြစ်များထဲက အမှတ်ရစရာတစ်ခုကို ပြောပြလို့နေတယ်။
““ကလေးလေးတွေကတောကဆိုတော့ဆံပင်ကောက်တိကောက် ကွေးနီကြောင်ကြောင်နဲ့အူတူတူလေးတွေ၊ ကျွန်တော်ဘိုကလေးကို ရောက်သွားတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအကြီးမလေးကထမင်းကျက် မကျက် ကြည့်တတ်နေသလိုထမင်းအိုးတွေချတတ်နေပြီ၊ ဒါပေမယ့် သူတို့က တစ်သိန်းတောင်းတယ်၊ အကြီးမလေးကိုမပေးတော့ဘူးလုပ်လာ တယ်၊ သူ့အဖေကမပေးတော့ဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့လေ။ တကယ်ကျွန်တော် သူ့အဖိုး နဲ့လိုက်တွေ့ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ သက်သက်မဲ့ ငွေတောင်းတယ်လို့ယူဆရမလိုပဲ”” လို့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဘို ကလေးမြို့နယ်အထိသွားရောက်ပြီး မောင်နှစ်မသုံးယောက်သွားခေါ်ရပုံ ကို ကိုဇော်ထွန်းကဆက်ပြီးပြောပြနေတာပါ။
ဝေေ၀ဆိုတဲ့အကြီးမလေးအပါအ၀င်ကျန်တဲ့မောင်နှမတွေကိုကျွေး မွေးထားရတဲ့အတွက်ကျွေးမွေးစရိတ်အနေနဲ့မွေးစားတဲ့သူတွေက တောင်းတာကို ကိုဇော်ထွန်းအနေနဲ့မပေးနိုင်စရာမရှိပါဘူး။ သို့ပေမယ့်အလုပ်လုပ်နိုင်စပြုနေတဲ့အကြီးမလေးဝေေ၀ကိုမွေးစားသူတွေက မပေး ချင်ဖြစ်သွားစေတဲ့အကြောင်းအရင်းနောက်ကွယ်က အကြောင်းတရား ဟာ ကလေးချစ်တတ်သူကိုဇော်ထွန်းအတွက်အစိုးရိမ်ပိုစေခဲ့ပါတယ်။
““ကလေးတွေရဲ့အဘိုးကကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး၊ သူ့အဖေ ဆိုတာကလဲမမွေးနိုင်တော့လို့မွေးစားဖို့ပေးထားတာလေ၊ အဲဒါကိုသူတို့ကကျွေးထားတဲ့စရိတ်ဆိုပြီးတောင်းတာ။ ဒါ့အပြင်အကြီးမလေးက အလုပ် လုပ်တတ်နေတာကိုမပေးဘူးဆိုတော့ကလေးကိုခိုင်းဖို့အတွက်ခေါ် ထားတာကိုစိုးရိမ်တယ်””လို့ ပြောတဲ့ကိုဇော်ထွန်းဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာခေါ်တွေ့ခြင်းအပြင် ဝေေ၀တို့မောင်မနှမရဲ့အဘိုး၊ လက်ရှိမွေးစား ထားတဲ့အုပ်ထိန်းသူတွေအပါအ၀င်နဲ့ဝေေ၀တို့မောင်နှမကိုအပြီးအစီး ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝေေ၀တို့မောင်နှမသုံးယောက်ကိုလတ်တလော မွေးစားထားတဲ့အုပ်ထိန်းသူတွေကိုလဲကျေနပ်လောက်တဲ့ ကျွေးမွေးစရိတ် ကိုလည်းပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
““ အခုဆိုရင်ဝေေ၀ကတစ်တန်းတောင်တက်နေပြီ၊ သူ့မောင်လေး တစ်ယောက်ကမူကြိုမှာ၊ တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထဲကတစ် ယောက်အိမ်မှာထိန်းထားတယ်။ ဒါတွေကကျွန်တော့်ဆီကိုကလေးဆက် မမွေးနိုင်လို့ဆက်သွယ်လာတဲ့အဖြစ်တွေထဲကအဖြစ်တစ်ခုပါ၊ မမွေးနိုင် ရင်ဆက်သွယ်ပါ။ စွန့်ပစ်တာမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူး။ ကျွန်တော်က လို တာ ကို ထောက်ပံ့မယ်။ စွန့်ပစ်တာဟာကလေးတွေအတွက်အရမ်းအန်္တရာယ် များပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူပါရစေ””ဆိုပြီး စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ကလေးဆိုတဲ့အသံကြားတာနဲ့အမြဲတမ်းရှေ့ဆုံးရောက်အောင်ပြေးတတ် တဲ့ကိုဇော်ထွန်းကသူလိုက်လံကောက်ယူခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်ဟာ ခုနစ်ဦး အထိရှိနေပြီး မွေးစားချင်တဲ့သူတွေရှိရင်တောင်အပြီးအပိုင်လွှဲပြောင်း ပေးဖို့အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုပြုလုပ်သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းက ဗိုလ်တထောင်ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ဝင် တွေနေတဲ့ ဂိုဒေါင်နောက်ဖေးလမ်းကြားမှာ ရက်သားအရွယ် ကလေး ငယ်ကို လာရောက်ပစ်ထားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီး အစွန့်ပစ်ခံကလေး ရဲ့လက်မှာပတ်ထားတဲ့ လက်ပတ်မှာ အမေနာမည်ပေးထားတဲ့ စာတမ်း လေး တစ်ခုချိတ်ထားပါတယ်။ ဆေးရုံကနေ လာရောက်ပစ်ထားတာလို့ ယူဆရတဲ့အတွက် ကလေးကို ဆေးရုံကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး သွားပို့ထား တယ်လို့သိရတာကြောင့် ဆေးရုံလိုက်သွားချိန်မှာတော့ ကလေးကို ဆေးရုံက တာဝန်ယူစောင့်ရှောက်မွေးစားမယ့် သူတွေကို ရှာဖွေပေးနေ တဲ့အတွက် အလှူငွေသာ လှူဒါန်းခဲ့တယ်။ မွေးစားမယ့်သူတွေနဲ့ အဆင် မပြေရင် အဖွဲ့အနေနဲ့ကူညီဖို့အဆင်သင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
““ကလေးမွေးစားမယ့်သူတွေကိုကျွန်တော်ကအပြီးမလွှဲသေးဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့က ကလေးကိုမွေးချင်တာပဲရှိတယ်။ ကလေး ချေးပါရင်တော့ ရွံတာကိုမြင်ရတယ်၊ ကလေးချစ်ရင်ကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ချေးကလူ သေးကလူကိုလည်းခံရမယ်လေ။ ဒါမှဒီကလေးကိုသူ ချစ် တယ်။ ရေရှည်ဂရုစိုက်နိုင်ပြီးကလေးနဲ့ပါတ်သက်ရင်စိတ်ချရမယ်။ အဲလို မဟုတ်ရင်တော့ ကျွန်တော်ကပြန်ခေါ်ထားလိုက်တယ်”” ဆိုတဲ့ ကိုဇော်ထွန်းက ကြို့ပင်ကောက်မြို့မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပရဟိတ အလှူ သွားလုပ်ရင်းသင်္ချိုင်းမြေမှာ စွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ကလေးငယ်ကို ပွေ့ချီလိုက် ပြီးနောက်မှာ အလင်းသစ်ဦးတည်ရာမိဘမဲ့ ကလေးများကူညီထောက်ပံ့ ရေးအဖွဲ့ကို တည်ထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်မိသွားသူဖြစ်ပါတယ်။
လစဉ်သိန်းဂဏန်းချီဝင်တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာသင်္ဘောသားအလုပ် ကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီး မိဘမဲ့ကလေးများကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့စတင် ဖွဲ့စည်းချိန်က ကလေးစောင့်ရှောက်စရိတ်တွေအတွက် အလှူငွေကို တစ်လမ်းဝင်တစ်လမ်းထွက် လိုက်ကောက်ခဲ့ရာမှာ တချို့ တချို့ရဲ့ အထင်သေးခြင်း အယုံအကြည်မဲ့ခြင်းတွေနဲ့ကြည့်တဲ့ အကြည့်တွေ ကိုလည်း ခံခဲ့ရတယ်လို့ကိုဇော်ထွန်းကဆိုပါတယ်။
အင်းစိန်ဘူတာရုံမှာ စွန့်ပစ်ခံကလေးငယ်တစ်ဦးကို မွေးစားလိုက်တဲ့အုပ်ထိန်းသူရင်ခွင်မှာကော်ရှူတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေ တာကို ပြန်လည်ကောက်ယူပေးဖို့လည်း ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ စီစဉ် လို့နေပြန်ပါတယ်။
ဒမိဘတွေ ဆွေမျိုးတွေအနေနဲ့ မမွေးနိုင်လို့ စွန့်ပစ်မယ်ဆိုရင် ကလေးကို စိတ်ချရတဲ့ နေရာတွေမှာ ထားစေချင်တယ်၊ ဒီအတိုင်းတွေ့ ရာနေရာမှာထားခဲ့လို့ မသမာသူလက်ထဲရောက်သွားမှာ စိုးရိမ်တယ်””
စွန့်ပစ်ထားတဲ့ကလေးငယ်တွေကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်လက်ခံယူ ပေးပြီး ဆေးစစ်တာတွေကိုအရင် လုပ်ပေးပါတယ်။ ပိုလီယိုဖြစ်နေတဲ့ ကလေး၊ မသန်စွမ်းဖြစ်နေတဲ့ ကလေးအပါအ၀င် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီဖြစ်နေတဲ့ ကလေးတွေ၊ မိဘစွန့်ပစ်ထားတဲ့ ကလေးငယ်တွေကိုလည်း ဆက်သွယ်ရင် သူခေါ်မွေးစားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
““စွန့်ပစ်ခံကလေးတွေလဲ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာတတ်တွေ ဖြစ်နိုင် တာပဲလေ။ သူတို့ လေးတွေလမ်းဘေးမှာ လေလွင့်နေတာကို မကြည့်ရက် ပါဘူး၊ သူတို့လေးတွေ စာသင်ခန်းထဲမှာ စာသင်နေတာကိုပဲ မြင်ချင်ပါ တယ်၊ ကျွန်တော့်ဆီပို့ပေးတဲ့ ကလေးတွေကို အချိန်မရွေးပြန်လာကြည့် နိုင်ပါတယ်၊ စာသင်နေပြီး ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ကလေးတွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သက်သေပြနိုင်တယ်၊ နောက်အရွယ်ရောက်လို့မိဘတွေအနေနဲ့ပြန်ခေါ် ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ပေးပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကလေးဘွဲ့ရပညာတတ်တဲ့အချိန်ထိတော့ကျွန်တော်ပြန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ပညာ တတ်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီဆိုမှပြန်ပေးမယ်”” လို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောနေတဲ့ ကိုဇော်ထွန်းက ကလေးမိဘတွေကိုလည်းကလေးစွန့်ပစ်ရတဲ့အကြောင်း ကိုအပြစ်မတင်တဲ့အပြင် အခုလိုထောက်ပံ့စောက်ရှောက်ခွင့်ရတာကိုပဲ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
မိဘမဲ့ကလေးငယ်၊ စွန့်ပစ်ခံကလေးငယ်တွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှု ၀န်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ စမတောင်မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းနဲ့အခြားမိဘမဲ့ကလေး ဌာနပေါင်းများစွာရှိနေသော်လည်း အခုလိုတွေ့ရာနေရာကနေဆက်သွယ် ပေးရင်လာရောက်ကောက်ယူခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်ရာဆက်စပ်ဌာနတွေဆီ ဒါမှမဟုတ်မွေးစားချင်သူတွေဆီ ကူညီထောက်ပံ့မှုပေးနေတဲ့အလင်း သစ်ဦးတည်ရာမိဘမဲ့ ကလေးများကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့မှာကိုဇော် ထွန်းအပါအ၀င် စိတ်တူမိတ်ဆွေ အချို့က ငွေပဒေသာပင်စိုက်ထူခြင်း၊ သီးသန့်အလှူငွေကောက်ခံခြင်းတွေနဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။
““ တခြားဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အထောက်အပံ့ကိုမှကျွန်တော်မယူပါဘူး၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပါလာရင်ကျွန်တော်တို့က လွတ်လပ် မှာမဟုတ်တော့ဘူး ကျွန်တော်က လွတ်လပ်မှုနဲ့ပဲကျွန်တော်ချစ်တဲ့ ကလေးတွေကိုကူညီချင်တယ်”” လို့ ကိုဇော်ထွန်းက လူငယ်ပီပီတာဝန်ယူမှုအပြည့်ယူလိုစိတ်နဲ့ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးရဲ့ရင်ပြင်တော် ပေါ်မသန်းစွမ်းကလေးငယ်တစ်ဦးကိုစွန့်ပစ်သွားလို့ကောက်ယူဖို့ကြိုး စား ပေမယ့်အစိုးရလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးက တာဝန်ယူကယ်ဆယ် လိုက်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေပြေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်မရသေး တဲ့အတွက်အဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ရှားရတာမှာအန်္တရာယ်များစွာ၊အခက် အခဲများစွာ ကြုံတွေ့ရပြီးကြုံလာမယ့် အန်္တရာယ်တွေကိုရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့အ မြဲစဉ်းစားရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်္ဘောသားဘ၀တုန်းက ရှိတဲ့ ငွေလေး တွေနဲ့ အငှားယာဉ် ထောင်ထားသူကိုဇော်ထွန်းကဘယ်လိုအခက်အခဲ မျိုးကြုံနေပါစေ ““ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိ အစ်ကိုက လိုက်ကောက်မှာပဲ။ ဒါ ကြောင့် ကလေးငယ်တွေကိုမစွန့်ပစ်ပါနဲ့၊ လာခေါ်မယ်၊ ဘယ်လိုအကြောင်း မျိုးဖြစ်ဖြစ်ကူညီမှာပါ။ အလင်းသစ်ဦးတည်ရာမိဘမဲ့ကလေးများကူညီ ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အမှတ် ၁၁ ၊ ပထပ်၊ ရွှေဘိုလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ၀၉-၃၁၅၁၇၇၀၄။ ၀၉-၂၅၂၇၀၃၃၀၃ ကိုသာဆက်သွယ်လိုက်ပါ”” လို့ သတင်းစကားပါးလိုက်ပါတယ်။
ဘယ် နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်အရွယ်ပဲဖြစ် ဖြစ်စာဖတ်သူအနေနဲ့စွန့်ပစ်ထားတဲ့ကလေးငယ်တစ်ယောက်ယောက် ကို တွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်အထက်ကဖုန်းနံပတ်ကိုသာ ဆက်သွယ်ပေးလိုက်ပါ။ ကိုဇော်ထွန်းဆိုတဲ့သဘောင်္သားလူထွက်ကလာကောက်ပါလိမ့်မယ်ခင် ဗျာ။
စက်တင်ဘာလ ၃ ရက် ၂၀၁၅
သျှမ်း တိုင်းရင်းသားများ ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီ အနေဖြင့် လက်ရှိ အချိန်အထိ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၊ NLD မည်သည့် ပါတီ နှင့်မျှ မဟာမိတ် မဖွဲ့ရသေးပဲ တိုင်းရင်းသား အရေး ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်း ရေး တို့အတွက် နေရာမှန်တွင် ဆက်ရှိ နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပါတီ ဥက္ကဌ ခွန်ထွန်းဦးက ပြောသည် ။
“ အရင်ကတော့ NLD ကို စောင့်ခဲ့ ဖူးတယ် ။ အတိုက်အခံ ပါတီအဖြစ် ဆက်ရပ်မလား တိုင်းရင်းသား အရေး ဒီမို ကရေစီ အရေးတွေအတွက် တစိုက်မတ်မတ် လုပ်မလား ဆိုပြီးတော့ပါ ။ အခုတော့ ကိုယ့်နေရာမှာဘဲ ဆက်နေမယ် ။ အတိုက်အခံ အဖြစ်ပဲ ဆက်ရပ် တည်မယ် ။ ဘယ်ပါတီနဲ့မှ အပေးအယူ မဟာမိတ် ကိစ္စတွေ အတွက် သဘောတူထားတာ မရှိ သေးပါဘူး ” - ဟု ပါတီ ဥက္ကဌ ခွန်ထွန်းဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည် ။
ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ် လာသည်နှင့် အမျှ ပါတီ အများစုမှာ အစိုးရဖွဲ့နိုင်ရေး ကိစ္စများ အပါဝင် မဲဆန္ဒနယ် နေရာ ကိစ္စရပ်များ အတွက် နိုင်ငံရေး ပါတီအချင်းချင်း မဟာမိတ် ဖွဲ့မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ရွေး ကောက်ပွဲဝင်မည့် ပါတီ အဆင့်မြင့် တာဝန်ရှိသူ တဦးလည်းဖြစ် ၊ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး မန်နေဂျာလည်းဖြစ် သူက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ အတည်ပြု ပြောဆိုသည် ။
ထို့အပြင် ၄င်းက ဆက်ပြီး - “ ကျားဖြူ ပါတီနဲ့ သူ့ရဲ့ မိတ်ဘက် တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနဲ့ မဟာမိတ်တွေ ဖြစ်ပြီးသား ဘဲလေ ။ နောက်ပြီး NLD ပါတီက လည်း ကျနော်တို့ရဲ့ (ယခင်) ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ ဥက္ကဌဟောင်း သူရဦး ရွှေမန်းနဲ့ နီးစပ်တော့ ခုတောင်မှ ၂ ပါတီ ခေါင်းဆောင် တချို့တွေ မဟာမိတ်တွေ ဆက်ဖြစ်နေ သေးတာဘဲ ။ မဟာမိတ် ဖွဲ့လို့ ကောင်းတဲ့ အချိန်ပေါ့ ” - ဟု ၄င်းက ပြောသည် ။
ဦးခွန်ထွန်းဦးမှ ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန် ယူနေသည့် တိုင်းရင်းသား ပါတီ ၁၁ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ မဟာမိတ် အဖွဲ့ UNA သည်လည်း တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ပေါင်းစု ဖြစ်သည့် ညီညွတ် သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ် ကောင်စီ UNFC ၏ မဟာမိတ် ဖြစ်နေပါသည် ။
“ နိုင်ငံရေးမှာ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတွေ ဘာကြောင့် မအောင်မြင် သလဲဆိုတာ တပ်ပေါင်းစု မူဝါဒနဲ့ လွဲချော် လို့ပါပဲ ကျနော်တို့တော့ အတိုက်အခံ အဖြစ်ပဲ ဆက်ရှိနေမှာပါ” - ဟု ခွန်ထွန်းဦးက ပြောသည် ။
အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းရင်းသား နယ်မြေ များရှိ မြန်မာစကား မပြောသည့် နယ်မြေ များတွင်ပါ ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ရန် စီစဉ်နေသဖြင့် နိုင်ငံရေး အင်အားစုများက NLD ၏ တိုင်းရင်းသားရေး ရာ မူဝါဒ အပေါ် ဝေဖန်မှုများ ရှိနေပါသည် ။
စက်တင်္ဘာလ (၃)ရက်နေ့ ထုတ် အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၄) အမှတ်(၃၅)
စက်တင်္ဘာလ (၄)ရက်နေ့ ထုတ် Auto World Journal အတွဲ - ၄၊ အမှတ် - ၃၃
စက်တင်္ဘာလ (၂)ရက်နေ့ ထုတ် Good Health ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပရေးရာ ဂျာနယ် အမှတ် ၅၅၄
ဂျာနယ် ဖတ်ရှုရန် ဒီနေရာကို နှိပ်ပါ သတင်းအပြည့်အစုံဖတ်ရန် »
စက်တင်္ဘာလ (၃)ရက်နေ့ ထုတ် ပြည်မြန်မာ သတင်းဂျာနယ် အမှတ် ၉၈၈
သင်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ ဘာတွေဖတ်သလဲ စိတ်ဝင်စားသလဲ
ဆရာလေးတစ်ပါး အဓမ္မပြုကျင့် ခံရ
ယခုဖော်ပြထားတဲ့ ဓါတ်ပုံမှာ နမူနာ ဓါတ်ပုံသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ - အင်တာနက် မန္တလေး ပြင်ဦးလွင် မြို့နယ်တွင် ဆရာလေး တစ်ပါးအား အ...
တရားခံပြေးဖမ်းရာမှ ရဲနှစ်ဦး သံလျင်၌ သေဆုံး
သန်လျှင်မြို့နယ်တွင် တရားခံပြေး တစ်ဦးအား ရဲမှသွားရောက် ဖမ်းဆီးစဉ် ပြန်လည်ခုခံပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ ဦးအား ဓားဖြင့်ထိုးသတ် ထွက်ပြေးလာသူ တ...
ချစ်ကြိုက်နေသူက အလိုမတူဘဲ အဓမ္မပြုကျင့်
မန္တလေး ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်တွင် ချစ်ကြိုက်နေသူက အလိုမတူဘဲ အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မူးရုံးက က သိရသည်။ ...
ထိုင်းနိုင်ငံ ချချိုဆောင်း ပြည်နယ်မှာ သဘောကောင်းပြီး ခလေးချစ်တတ်တဲ့ အဖိုးအိုကြီး လို့ရွာက လူသိများတဲ့ စုံကျစ် အသက် ၅၉နှစ်ကို ယုံကြည့်ြ...
နေ့ခင်းကြောင်တောင် ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကို သတ်၊ ပစ္စည်းလု
ယနေ့ ကျွန်းလှမြို့ ပေါ်တွင် ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် အမျိုးသမီးအား သတ်ပြီး ရွှေများ လုယတ်သွားမှု ယနေ့ နေ့ လယ်က ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ဆိုင်နာမည်က ဦးသန...
အဖွားအိုများကိုမှ မုဒိန်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် တရားခံ
29 August 2015 ထိုင်းနိုင်ငံ အန်ထောင်းနဲ့စမုစာကွန် မြို့ နယ်တွေမှာ အိမ်မှာတယောက် ထဲနေတဲ့ အဖွားအိုတွေကိုမှ မုဒိန်းကျင့်ပြီး သေလော...
ကျောင်းသူ (၁) ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရ
ကလေးမြို့နယ် တင်သားကျေးရွာတွင် ယခုလ(၁)ရက်နေ့၌ အရွယ် မရောက်သေးသည့် (၁၀) တန်း ကျောင်းသူအား ခဲအို ဖြစ်သူမှ တူမဖြစ်သူ နေမကောင်း၍ ဆေးရုံ...
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဖူးခက်၊ ကသူဒေသမှာ မြန်မာမိန်းခလေးငယ်တဦးကို သူ၏ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းက အက်ဆစ်နှင့် ပက်လိုက်သည့်အတွက် ဘယ်ဘယ်မျက်လုံ...
တည်းခိုခန်းတွင် သေဆုံးခဲ့သည့် အမျိုးသမီးအမှုကို လူသတ်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲ
သြဂုတ်(၃၀)ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်း အချိန်တွင် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်ရှိ Mann Royal Inn အခန်းအမှတ် (G-2) တွင် တည်းခိုနေသည့် မ….(၃၂)နှစ်...
စလင်း သြဂုတ် ၃ဝ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စလင်းမြို့တွင် သြဂုတ် ၂၉ ရက် နံနက် ၅ နာရီ ခန့်က လက်ပံပင်စာသင်တိုက်မှ သံဃာများသည် မြို့နယ်သာသနာ့ဟိ...
Design by THIT HTOO LWIN
. Published by THIT HTOO LWIN
. Modified by myOpenware, web design and development company in Myanmar.